Otu esi eji TikTok maka ire ahịa B2B | Martech Zone
TikTok bụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-eto ngwa ngwa n'ụwa, ma nwee ike iru n'elu 50% nke ndị okenye US. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ B2C na-arụ ọrụ dị mma nke itinye TikTok iji wulite obodo ha ma na-ebuwanye ahịa karịa, were. Duolingo's TikTok ibe ọmụmaatụ, mana gịnị kpatara na anyị anaghị ahụ ọtụtụ azụmaahịa na azụmaahịa (B2B) ịre ahịa na TikTok?
Dị ka akara B2B, ọ nwere ike ịdị mfe ịkọwa na ịghara iji TikTok dị ka ọwa ahịa. E kwuwerị, ọtụtụ ndị ka na-eche na TikTok bụ ngwa edobere maka ndị ntorobịa na-agba egwu, mana ọ gbasaala karịa nke ahụ. N'ime afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ puku obodo niche na-amasị dị ọcha na akwụkwọ etolitela na TikTok.
Ịre ahịa B2B na TikTok bụ maka ịchọta obodo na-emetụta ngwaahịa gị na ịmepụta ọdịnaya bara uru maka obodo ahụ. Nke a bụ kpọmkwem ihe anyị na-eme na anyị Ibe TikTok na Collabstr, n'ihi ya, anyị enweela ike ịmepụta puku kwuru puku dollar na azụmahịa ọhụrụ dịka ụlọ ọrụ B2B.
Yabụ kedu ụzọ ụfọdụ nke ịre ahịa B2B na TikTok?
Mepụta Ọdịnaya Organic
A maara TikTok maka ya organic iru. Ikpo okwu na-enye mkpughe organic karịa ka nyiwe ọdịnala dị ka Facebook ma ọ bụ Instagram. Nke a pụtara na ị nwere ike nweta ezigbo bọọlụ anya na akara B2B gị naanị site na ikesa ọdịnaya organic na ibe TikTok gị.
Yabụ kedu ụdị ọdịnaya organic ị nwere ike biputere maka akara B2B gị?
ikpe Studies - Ọmụmụ ikpe bụ ụzọ dị mma isi dọta ndị ahịa nwere ike na-enweghị mgbasa ozi ozugbo nye ha. Ị nwere ike ịmepụta ọmụmụ ihe site na ịchọta akụkọ ịga nke ọma na ụlọ ọrụ gị na igosi ihe ndị ha mere nke ọma nye ndị na-ege gị ntị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ na-eme mgbasa ozi vidiyo maka ndị ahịa gị, mee nchọpụta ụfọdụ na mgbasa ozi vidiyo B2B kacha mma yana ihe kpatara ha ji dị irè. Ị nwere ike ịnara mgbasa ozi sitere na ụlọ ọrụ dị ka Red Bull wee gwa ndị mmadụ ihe mere ha ji dị irè. Dị ka o kwesịrị ịdị, ị ga-adọta ndị mmadụ bụ ndị na-ere ahịa ma ọ bụ ndị nwe ụlọ ahịa na-achọ onye ga-emere ha mgbasa ozi. Ọmụmụ ihe na-enye gị ohere idobe onwe gị dị ka ọkachamara, nke a dị mma n'ihi na mgbe ndị na-ege gị ntị dị njikere ịzụrụ ihe, ha ga-ebu ụzọ abịakwute gị.
Olee otú-Iji Vidiyo - Otu esi eme vidiyo bụ ụzọ dị mma iji dọta ndị na-ege gị ntị na TikTok. Site n'inye uru site na agụmakwụkwọ, ị ga-ewulite ndị na-eguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa nwere ike. Iji mepụta vidiyo dị irè-ịke maka akara B2B gị, ị ga-ebu ụzọ ghọta onye ahịa gị lekwasịrị anya. Ọ bụrụ na onye ahịa gị lekwasịrị anya bụ ndị nwe azụmaahịa ndị ọzọ, ọdịnaya gị kwesịrị ịmasị ha ozugbo. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m na-agba ọsọ ụlọ ọrụ ihe osise B2B, enwere m ike ịmepụta vidiyo na-egosi ndị ọzọ ka ha nwere ike ịmepụta akara ngosi efu maka akara ha. Site n'inye uru, ị na-adọta ndị na-ege ntị tụkwasịrị gị obi.
N'azụ Mpaghara - Ọdịdị nke ọdịnaya vidiyo dị mkpụmkpụ na-enye ụlọ ọrụ ohere ka ọ pụta ìhè. N'adịghị ka ọ dị na nyiwe ndị ọzọ dị ka Instagram, ọ dị mma biputere ọdịnaya na-adịghị ọcha na nke dị n'azụ ihe nkiri na TikTok. Ibisa vlogs, nzukọ, na mkparịta ụka nke na-egosipụta ọrụ kwa ụbọchị na ụlọ ọrụ B2B gị ga-ewulite ntụkwasị obi n'etiti azụmahịa gị na onye ahịa gị lekwasịrị anya. Na njedebe nke ụbọchị, ụmụ mmadụ na-ejikọta na ụmụ mmadụ karịa ka ha na ụlọ ọrụ jikọọ.
Chọta ndị na-emetụta TikTok
Ọ bụrụ na ịmaghị etu esi ebido imepụta ọdịnaya maka ụlọ ọrụ B2B na TikTok, tụlee ịchọta ndị na-eme ihe na niche gị iji mee ka ị pụọ n'ala.
Ezi afọ ọhụrụ fam? Nke a bụ otu ị ga-esi jiri Collabstr mee mkpọsa influencer! #mgbakọ
♬ ụda mbụ - Collabstr
Ndị na-eme ihe TikTok nwere ike inyere azụmaahịa B2B gị aka n'ụzọ dị iche iche. Ka anyị banye n'ime ụzọ ole na ole ị nwere ike isi tinye ndị na-eme ihe ike maka ịre ahịa B2B gị na TikTok.
Inye Ọdịnaya - Otu ụzọ dị mma isi tinye ndị na-emetụta TikTok maka ịre ahịa B2B gị bụ site n'ịchọta na iweta ndị na-eme ihe na niche gị ka ịmepụta ọdịnaya akwadoro maka gị. Ka anyị kwuo na ị bụ onye na-eweta nnabata igwe ojii ma ị na-agbalị ikpughekwu ndị nwe azụmaahịa site na TikTok. Otu ụzọ dị mma isi mee nke a ga-abụ chọta onye mmetụta na oghere teknụzụ, nke nwere ndị na-ege ntị nke ndị teknụzụ ndị ọzọ na-achọkarị nnabata igwe ojii maka ngwaahịa ha. Were Onye okike TikTok a, dịka ọmụmaatụ, ọ bụ onye nrụpụta ngwanrọ, yana ndị na-ege ya ntị ga-enwe mmasị ịnụ banyere ngwọta nnabata igwe ojii.
TikTok Mgbasa ozi - Ụzọ ọzọ dị mma iji nweta ndị na-eme ihe TikTok bụ site n'ime ka ha mepụta ọdịnaya maka mgbasa ozi gị. Ozugbo ịchọtara onye na-eme ihe na-aghọta ngwaahịa gị n'ezie, ị nwere ike ịkwụ ha ụgwọ ka ha mepụta mgbasa ozi vidiyo dị elu maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ B2B gị. Mgbe onye na-emepụta ihe na-emepụta mgbasa ozi, ị ga-enwe ike whitelist ọdịnaya ha ozugbo site na TikTok, ma ọ bụ ị nwere ike nweta faịlụ mbụ n'aka ha wee mee ya dị ka mgbasa ozi na nyiwe ndị ọzọ. Iji influencers mepụta gị TikTok mgbasa ozi nwere ike itinye ihe akaebe ọha na eze na izi ezi nke na-adịghị na ọdịnaya nwere akara ọdịnala.
Kedu ka esi eme mgbasa ozi TikTok na-adịghị mma? #mgbakọ
♬ Ụbọchị anwụ anwụ - Ted Fresco
Kpọọ ndị okike ọdịnaya TikTok - Ụzọ ọzọ ị ga-esi nweta ndị na-emetụta TikTok maka akara B2B gị bụ site n'ịnye ha ọrụ ka ha mepụta ọdịnaya. Ndị na-eme ihe TikTok maara nke ọma na ikpo okwu, algọridim ya na ndị na-ege ntị na-eri ọdịnaya na TikTok. Iji ozi a, ha nwere ike ịmepụta ọdịnaya na-adọrọ adọrọ ma na-akpali akpali nke na-enweta nnukwu nlele. Nke a nwere ike ịbụ ihe otu gị na-enweghị ike ime, nke dị mma, N'ọnọdụ ahụ, chọta onye na-eme ihe na-aghọta ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ B2B gị, ma kwụọ ha ụgwọ kwa ọnwa iji mepụta ọdịnaya maka ibe gị.
Mgbe ị na-elele TikTok dị ka ọwa ahịa B2B, ọ dị mkpa imeghe uche gị maka ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi dị ka ụlọ ọrụ B2B na TikTok.
Nke mbụ, ị ga-achọpụta ndị na-ege gị ntị. Kedu onye nwere ike ịhụ ngwaahịa gị bara uru? Ozugbo ịmara ndị na-ege ntị, ị ga-achọ ịchọpụta onye na-ejide ndị na-ege ntị na TikTok.
Site n'ebe a, ị nwere ike were onye na-arụ ọrụ nke ọma na-ejide ndị na-ege ntị, ma ọ bụ ị nwere ike iji ọdịnaya ha dị ka mkpali ma malite ịmepụta ọdịnaya nke gị ahaziri maka otu ndị na-ege ntị.
Chọta ndị na-emetụta TikTok Soro Collabstr na TikTok
ngosi: Martech Zone na-eji njikọ njikọ ya maka Njikọ ke ibuotikọ emi.
Tags: b2bahịa b2bb2b ahịa atụmatụn'azụ Mpagharaakwụkwọazụmahịa-azụmahịaikpe ọmụmụdị ọchanjikọduolingoesi vidiyoinfluencerahịa ahịaorganic ọdịnayaobere videoTikTokmgbasa ozi tiktokndị na-emepụta ọdịnaya tiktokndị na-eme ihe nkiriọdịnaya vidiyoatụmatụ ọdịnaya vidiyomkpirisi vidiyo